विकास कि विनास ? : यसरी गाउँ छिर्दैछ 'विकास'
विरहको धुन बजाउँदै बाह्रपोखरी
वरपिपल र चौतारीको संरक्षण
१६ सय मिटर उचाइमा सोह्र तस्विर
विकास कि विनास ? : यसरी गाउँ छिर्दैछ ‘विकास’
घटना र विचार, न्युज डेस्क !3months ago February 24, 2019
पुष्पलाल–मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत नुवाकोटको लिखु गाँउपालिका–१ शेरामा सडक विस्तार गरिँदै । उक्त लोकमार्गको मध्यबिन्दु पर्ने नुवाकोटको पाटी भन्ञ्याङदेखि सामरीसम्मको बाटो निर्माण गरिँदै । सडक बन्दै गर्दा हरियो जंगलको निर्मम विनास पनि निम्तिरहेको छ । तस्बिर : रामहरि न्यौपाने